Fomba 10 hanovana ireo mpitsidika mampiasa Psychology | Martech Zone
Alatsinainy, Novambra 26, 2012 Alahady, Novambra 25, 2012 Douglas Karr
Matetika ny raharaham-barotra dia tsy mifantoka afa-tsy amin'ny fifanarahana hampandehanana ny varotra bebe kokoa. Heveriko fa lesoka izany. Tsy satria tsy mandeha izy io fa satria misy fiantraikany amin'ny isan-jaton'ny mpijery fotsiny. Tsy ny rehetra no liana amin'ny fihenam-bidy - maro no miahiahy kokoa momba ny fandefasana ara-potoana, ny kalitaon'ny vokatra, ny lazan'ilay orinasa, sns. Raha ny tena izy, dia te-hiloka izany aho fahatokiana matetika dia tetikady fanatsarana fiovam-po tsara kokoa noho ny a fihenam-bidy.
Matetika ara-tsaina ny fiovam-po. Ny mpanjifa sy ny orinasa dia tsy mividy vola be fotsiny, matetika izy ireo no mividy noho ny tahotra, fahasambarana, fahafaham-po amin'ny tenany, endrika-tenany, fiantrana… misy antony marobe. Ka ahoana no ahafahanao mampiasa ireo fotoana ireo?
Samy hafa isika rehetra, fa amin'ny tranga matetika, ny atidohantsika dia mora mihetsika amin'ny fomba mitovy amin'izany, ary ny fahazoana ireo sombin-kevitra ireo ao an-tsain'ny olombelona dia afaka manampy ny orinasanao hitady fomba famoronana hamindra ara-etika ny mpividy bebe kokoa hiteny hoe "Eny!" amin'ny vokatrao na serivisinao.
Helpscout dia namoaka ity sary ity, Fomba 10 hanovana mpanjifa bebe kokoa (mampiasa Psychology), ary azonao atao ny misintona ebook izay mandeha amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Tags: fiovam-pofanavaozana fiovam-poDownloadeBookfree ebookfanampianaPsychology
Dec 3, 2012 ao amin'ny 8: PM PM
Ny fahazoana ny zavatra tadiavinao sy tadiavinao dia heveriko fa mpiorina lehibe indrindra hahazoana mpanjifa bebe kokoa. Eny, samy hafa daholo isika ary amin'ny maha mpandraharaha dia tsy maintsy dinihintsika izany. Manaova paikady isan-karazany mba hitenenan'ny fanantenana anao ho ENY. Aza mifikitra amin'ny paikady iray fotsiny.
Misaotra ny fizarana:)